လူလုပ်သလို ကွန်ပျူတာကို ခိုင်းချင်လို&#4 — MYSTERY ZILLION
လူလုပ်သလို ကွန်ပျူတာကို ခိုင်းချင်လို&#4
ကိုယ်လုပ်ချင်တာတွေကို ပြောပြထားပြီးတော့ . .ခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရုံနဲ့ ကွန်ပျူတာက သူ့အလိုလိုလုပ်တဲ့ နည်းလေးများရှိမလားမသိဘူးနော် . . .
ဥပမာပြောရရင် . . photoshop ထဲက action လိုပေါ့ . . ကိုယ်လုပ်တာတွေကို rec လုပ်ပီးမှတ်ထားတယ်. . ပြီးရင် သူ့ကို run လိုက်တာနဲ့ အလုပ်လုပ်တော့တာပဲ . .အဲ့ဒီလိုမျိုးကို window ပေါ်မှာ သုံးချင်လို့ . .
ကျွန်တော်က ဘယ်မှာသုံးချင်လဲဆိုတော့ . . ဂျီတော့ကို proxy ချိန်းတဲ့နေရမှာသုံးချင်လို့ . .
ခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင် . .(၁) ဂျီတော့ပွင့်သွားပြီးတော့ (၂) setting ကိုနှိပ်မယ် (၃) ပြီးရင်ကွန်နရှင်ကိုနှိပ်မယ် (၄) Detect proxy utomatically ကိုရွေးမယ်/ ဒါမှမဟုတ် use the following proxy ရွေးပီးတော့ ဆော်ဒီ Proxy ထည့်မယ် . . . .ဒါဆိုအဆင်ပြေသွားမယ်
လုပ်လို့ရပါတယ်... Programming အပိုင်းကို နိုင်ရင်ရတာပဲလေ... ဒီထက်မြင့်တဲ့ Artificial Intelligence Devices တွေတောင် ထုတ်နေတာကိုး...
အဲ့သလိုသုံးချင်ရင် အဲ့သလို Code နိုင်အောင် ကြိုးစားပါ...
ကျွန်တော်ကတော့ အဲ့လိုမCode နိုင်သေးလို့ Manual နဲ့ပဲ သွားနေတယ်..
ရပါတယ်ခင်ဗျ။ အထက်က အကို ပြောသလို Programming ပိုင်းပိုင်ရင်ရပါတယ်။
အရမ်းတတ်စရာမလိုပါဘူး။ အလယ်အလတ်လောက် သိတယ်ဆိုရင်ပဲ လုပ်လို့ရပါတယ်။
ခက်တာက ဒါလေးအတွက်နဲ့ Programming ကိုလေ့လာရမယ် ဆိုရင်လဲ မတန်ဘူးပေါ့နော်။
ဒီတော့ ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့ ဒီ MZ မှာ Programming ကိုပိုင်တဲ့ သူတွေတပုံကြီးဗျ။
သူတို့ကို အကူအညီတောင်း ရမှာပေါ့နော်။
ကဲ... MZ မှ Programmer များကူညီလိုက်ကြပါအုံးနော် .....
ကျွန်တော်က Programming မရလို့ ဘေးကနေ ပြောရုံကလွဲပြီး မတတ်နိူင်ပါဘူး...
ကျွန်တော့် အထင် ကိုစေတန် လုပ်တတ်လောက်တယ်ဗျ.... တကယ်လို့ သူမလုပ်တတ်ဘူးဆိုရင်တောင် ဒီ Forum ထဲမှာဘယ်သူလုပ်တတ်တယ်ဆိုတာ သူသေချာပေါက်သိတယ်ဗျ.... (အဟီး ... ကိုစေတန်ရေ မတယ်လို့တော့ မထင်နဲ့နော်)
ပြီးတော့ ဒုတိယမြောက်က ကိုပရင့် ရလောက်တယ်ဗျ ... အဟိ ... တကယ်ပြောတာ ....
ကိုပရင့်က လိုင်းပေါင်းစုံလေ (မထသ ကိုပြောတာမဟုတ်ပါ).....
ကိုပရင့်မရရင် ဇူဇူး ခေါ် ဇာဏီအောင် ရလောက်တယ်ဗျ .... ဟီးဟီး
တခြားရှိသေးတယ်ဗျ ကိုရေလိုအေးတို့ ကိုစိုင်းကျော်စွာတို့ ကိုယောင်တို့ ကိုအလက်ဇန်ဒါးတို့ အများကြီးကျန်သေးတယ် .........
သူတို့ကို အကူညီတောင်း ပါ အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်။
ဟီး:D လုပ်တက်တဲ့သူတွေအများကြီးတဲ့ . .:5: ကူညီကြပါအုန်းနော် . .ဟဲဟဲ ကျွန်တော်ကတော့ မိဇူးဇူးကို အားကိုးချင်တယ်ဗျာ . .ချောရီး ချောရီး . .ဇာဇာကိုပြောတာ အဲမဟုတ်ပါဘူး . .ဇာဏီအောင်ကို ပြောတာ (ဇာဏီရေ ဇာဏီက MZ မှာလူချစ်လူခင်ပေါလို့ စကြည့်တာပါ ချိတ်မချိုးရဘူးနော်:68:)
ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာလေးက . .လုပ်တက်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ လွယ်မယ်ထင်တယ်နော်.. .အထက်က အချွန်နဲ့ မထားတာ့ . .ကိုစေတန်၊ ကိုပရင့်၊ ဇူဇူး ခေါ် ဇာဏီအောင်၊ ကိုရေလိုအေးတို့ ကိုစိုင်းကျော်စွာတို့ ကိုယောင်တို့ ကိုအလက်ဇန်ဒါးတို့ ကျွန်တော့်ကို ကူညီကြပါအုန်းနော်. . .
လုပ်တက်ချင်ရင် programming လေ့လာလို့တော့ မပြောလိုက်ပါနဲ့နော်. .မနေ့ကပဲ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ဖတ်လိုက်ရတယ် . .program ရေးတက်ချင်ရင် ၁၀ နှစ်အချိန်ပေးရမယ်တဲ့ဂျာ . .:77:
မကျွမ်းတာလည်း..ပါပါတယ်။ သင်ဖူးတယ်..ဒါပေ ့မယ်..ဆရာမတွေ နဲ ့ရန်ဖြစ်ပြီးတော ့...ကျွန်တော်အတန်းမသွားတော ့တာ..အဟုတ်..:D:D
ဘယ်နဲ ့ဂျာ...code တွေ သင်ပါတယ်ဆိုမှာ သူတို ့ရေးတာချည်းလိုက်မှတ်နေရတယ်။
project ကျတော့Copy/paste တဲ ့...ဟွန် ့....ကောင်းကောင်းပြောပေးလိုက်တယ်။
ရလဒ်ကတော ့...အနော် ဘာမှ မတတ်တော ့ဖူး..အဟီး :P:P:P
Me!, honestly ... Don't knowabit something concerning with "Programing".
When I was attending Network Dip. Course, I may get higher mark in IT Knowledge but I always get the lowest mark in "Programing".
ဂျီတော့ကို proxy ချိန်းတဲ့နေရမှာသုံးချင်လို့ . .
ရပါတယ် အစ်ကိုမောင် (နာမည်ကခေါ်ရတာထောက်လိုက်တာဗျာ ယောက်ျားအချင်းချင်းတောင် ဟင်းးးး :2::2::106::106:)
ဒါပေမယ့် window vista ရယ် အစ်ကိုရဲ့ english speaking and reading skill လေးရယ် grammarမှန်မှန်နဲ့ အသံထွက်မှန်တာ လေးတော့လိုမယ်ဗျာ ပြည့်စုံစုံသိချင်ရင်တော့
အဲဒီမှာသွားဖတ်ကြည့်ပါဗျာ ကျွန်တော်ကတော့ open/close program လေးတော့ သုံးဖူးတယ်ဗျာ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်အတွက် အဆင်မပြေလို့ ပိတ်ထားတယ်။
ခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရုံနဲ့ ကွန်ပျူတာက သူ့အလိုလိုလုပ်တဲ့ နည်းလေးများရှိမလားမသိဘူးနော် . . .
အဲဒါမျိုးဆိုရင်တော့ သေချာတယ် ကိုကိုhacker တွေအကြိုက်ဖြစ်သွားပါလိမ့်။
Axife Mouse Recorder နဲ့ဆို အဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဒီလင့်လေးမှာ ဒေါင်းလိုက်ပါနော်။
ပိုက်ဆံပေးစရာမလိုပဲ DEMO အဆင့်နဲ့တင် အဆင်ပြေမှာပါ။ full version လိုချင်တယ်ဆိုရင် ပြောပါ။ လင့်ထပ်ပေးလိုက်ပါ့မယ်။
ဒီလင့်က youtube မှာ ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတာ ရှင်းပြထားတဲ့ Tutorial video ပါ။ :67:
ဒါပေါ့.. လူလုပ်ရင် လူတောင်ဖြစ်သေးတယ်...:d
ဘာတုန်းဗျ လူလုပ်ရင်လူဖြစ်တာ ခက်တာပဲ :65: အနော် တစ်ခုမေးမလို ပါ...:106:
)ပညာလို အသူသတောင်းစား ဆိုလို့ပါနော့်:6:
mandy_x wrote: »
ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော်လည်း အင်တာနက်ထဲမှာ လိုက်ရှာနေတာ . .အခုထိ လိုချင်တာမတွေ့သေးဘူး. . .အခုပြောတဲ့ဟာလေးကို စမ်းကြည့်လိုက်အုန်းမယ် . .ကျေးဇူး ကမ္ဘာပါပဲ . . .
အကိုအောက်က ဓာတ်လိုက်သလို လို မိုးရွာသလို လို ကို
ဘာလဲဗျ... အစ်ကို့အောက်ဆိုတော့ ကျုပ်တောင် နဲနဲကျောင်သွားတယ်...ငုံကြည့်မိတာပေါ့..
အဲ့ဒါ Matrix လို့ခေါ်တယ်ကွဲ့... အဟိ.. ဘယ်လိုလုပ်လဲတော့မသိဘူး Google က ရှာထားတာ.. အဲ့ဒါ သူများရေးပြီးသား သုံးနေတာ..
ကြည့်ပါလား.. နာမည်တောင် Matrix တဲ့ .. အဲ့ဒါလည်း Matrix အမည်ခိုးထားတာ...:P
အဆင်ပြေမယ်လို့တော့ထင်ရတယ်. . .စမ်းသပ်ကြည့်တာမဆိုးဘူး . . ဒါပေမယ် . .action တွေရေးပီးမှ exe file နဲ့ save တော့ demo မှာ မပေးဘူးတဲ့ . .:D Full Version လေး ရှိရင်မစပါအုန်း . . .
matrix wrote: »
ကျွန်တော် အစ်ကို ပြောတာကို သဘောပေါက် ပါတယ် ဒါကတော့ အရှေ့က အစ်ကိုတွေပြောသွားသလိုပေါ့ program ကိုပိုင်မှရမယ် ကျွန်တော်ကော့ ကျွန်တော် သိလောက်သေးပြောမယ်နော် G-talk ကိုတော့ shortcut key နှင့်ခေါ်လို့ရတယ်ဗျာ Win + Esc ရယ်ဆိုရပြီဗျာ ကျွန်တော်လည်း ကျွန်တော် သိသလောက်လေးဖော်ပြတာပါ အရှေ့ အစ်ကိုတွေလောက်တော့ မရဘူး ဗျာ လေ့လာဆဲ ဟီး.............ဟီး................:D:D:D
အစ်ကိုပြောတဲ့ဟာက AutoHotkey ဆိုတဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲလ်နဲ့လုပ်လို့ရလောက်မယ်ထင်တယ်ဗျ။ အဲဒီဆော့ဖ်ဝဲလ်အကြောင်းကို သေသေချာချာသိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ kokoye2007[at]gmail[dot]com ကိုဂျီတော့မှာအက်ဒ်ပြီးမေးကြည့်ပါလား။ ကိုကိုရဲကိုအချွန်နဲ့တော့မပေးလိုက်ပြီ အထက်ကမေးက ကျွန်တော့်မေးလ်တော့မဟုတ်ပါဘူး ကျွန်တော်လဲအဲဒီဆော့ဝဲလ်မကျွမ်းလို့ သူ့မေးလ်ပေးတာပါ။ ကိုယ့်ဟာကိုယ်စမ်းမယ်ဆိုရင်တော့
Try to use Autoit.
MPT(India Technicians) use it to create :Pholy famous mptlogin.exe.:D
Here is the website - http://www.autoitscript.com/autoit3/
keyboard ချည်းပဲသုံးပြီးလုပ်ချင်တာအားလုံးကိုလုပ်လို့ရတယ်ဗျ။ တစ်ခုတော့ရှိတယ် ဒါက စက်ရဲ့အနှေးအမြန်ပေါ်မူတည်ပြီး delay time လေးတွေချိန်ပေးရတယ်ဗျ ဒါမှ သူကအဆင်ပြေတာ
autoit လေးသုံးတယ် သူက vbs နဲ့ထုတ်ပေးတယ်ဗျ sample လေးကတဆင့် လုပ်ကြည့်ရင်နားလည်မှာပါ။
အကြံဉာဏ်ပေးကြတဲ့ ညီအစ်ကိုများကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ် . ..
အခုအကုန်လုံးကို ဒေါင်းပြီးစမ်းကြည့်လိုက်တယ် . .:39: ရတော့ . မရသေးဘူး:p နဲနဲတော့ ဆက်လေ့လာရအုန်းမယ် . . .:106: ခေါင်းတွေလည်းမူးသွားပီ:
ကျွန်တော်က အဲ့ဂလိုမျိုးတွေကို ၀ါသနာပါတာတအားပဲ . . .အမြဲတမ်းစဉ်းစားနေရလို့လေ . .ပရိုဂရမ်လည်းရေးတက်ချင်တာ . .ဘယ်ကစရမှန်းမသိလို့ . .
ဒီထက်လွယ်တဲ့ ဆော့၀ဲလ်တွေရှိရင်လည်း ဆက်လက်ပြီး ညွန်ပြပေးကြပါအုန်းနော်. .